ခရမ်းချ ဉ်သီးငါးပိပန်ထွေဖျော် ~ သဘာဝရဲ့အာဟာရ
ငါးပိ...............၁ ဇွန်း( ထမင်းစားဇွန်း)
ခရမ်းချ ဉ်သီး....၃ လုံး( ကြီးကြီး၊ မှည့်မှည့် )
ကြက်သွန်ဖြူ .....၇ တက်
ခရမ်းချဉ်သီးကို ဇကာခံပြီးမီးဖိုပေါ်ကင်(သို.) ရေအနည်းငယ်နဲ.နှူးအောင်ပြုတ်
ရေအေးစိမ် ၊အအေးခံကာ ၊အခွံတွေနွှာထားပါ။
ကြက်သွန်ဖြူ ၊ ငရုတ်သီးစိမ်းကိုရောပြီးလှော်ပါ။
မီးဖုတ်ထားသောငါးပိကိုရောထည့်ကြိတ်ချေ ပေးပါ။ နှံ.သွားပြီဆိုရင် ပြုတ်ထား
သော (သို.) မီးကင်ထားသော ခရမ်းချဉ်သီးတွေ ထည့်ကာဖိချေ ပေးပါ။
ကြက်သွန်မြိတ်+နံနံပင်ပါးပါးလှီးကာ( နှစ်သက်ရင်) ဖြူးပေးနိူင်ပါတယ်..။